ဆုတောင်းပေးပါ... ~ White Angel
11:43 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး9comments
လူတစ်ယောက်မှာ ကျန်းမာခြင်းဟာ တစ်ကယ်အရေးကြီးတာပဲနော်...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈လလောက်ကတည်းက ကျွန်မလေ ..တရှောင်ရှောင်နဲ့ ချောင်းဆိုးနေခဲ့တာ...။
ဆေးရုံကြီးမှာလည်း..စက်ကြီးတွေနဲ့ ဆေးစစ်ပြီးပါပြီ..။ တီဘီ ပိုးလည်းမတွေ့ရ၊ကင်ဆာလက္ခဏာလည်းမပြဘာမှန်းကိုမသိပဲ...အခုထိတစ်ခါတစ်ခါ...
ချောင်းအရမ်းဆိုးတတ်ပါတယ်..၊ အဲဒီလိုဆိုးရင်လည်း..အားနဲ့ဆိုးရတာမို့...အဆုတ်ရဲ့ကြွက်သားတွေ အလွန်နာပါတယ်..၊နောက်ဆုံး ချောင်းဆိုး၊နှာခြေ..၊ရီရင်တောင် ညာဘက်ဂျိုင်းအောက်..အဆုတ်နေရာက အောင့်ပါတယ်..၊တစ်ပါတ်လောက်နေရင် ပျောက်သွားရော...။အထူးသဖြင့် အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ အလေးအပင်တွေ“မ”ရင် ပိုအောင့်ပါတယ်..။အခုလည်း အရမ်းအောင့်နေလို့ အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူပြီးပြန်လာခဲ့တယ်..။စိတ်အရမ်းညစ်နေတယ်..။အခုအချိန်မှာ ငွေပုံကြီး နဲ့ ကျန်းမာခြင်း...ဘယ်ဟာကိုယူမလဲဆိုရင်...ကျန်းမာခြင်းကိုပဲ အပြန်တစ်ရာ ရွေးမိမှာပဲ..သိလား...။အခုတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ အနားယူနေရပါတယ်။
အဲဒီရောဂါ...မြန်မြန်ပျောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးကြပါနော်... ။
ကျန်းမာရေး ကို ဂရုစိုက်ပါမမရယ်.
.မြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်....ပျော်ရွှင်သောနေ့လေး
တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ မမ....
may Allah give to u good health.
and may Allah give to easy life.
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ ..း)
ကျနော်လည်း ရန်ကုန်မှာတစ်ယောက်တည်းလာနေရတာ ဆိုတော့ နေမကောင်းဖြစ်ရင် အားငယ်တယ်ဗျ
နတ်သမီးလေးရေ..စက်တွေနဲ့စမ်းသပ်ထားတာတောင် တီဘီ ကင်ဆာဘာမှမတွေ့၇ဘူးဆိုတော့ ရိုးရိုး viral infections ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် virus ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးမရှိပါဘူး လူကိုယ်ထဲမှာ ၁ ပတ်လောက်နေပြီးသူ့ဟာ သူသေသွားပါလိမ့်မယ်။အရမ်းကြီးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ respiratory tract infection ဆိုတာ ကိုယ်ခံအား immune နည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစ်မ.....ဒါကြောင့်အစားအသောက်ကိုပုံမှန်စား အိပ်ရေးဝအောင်အိပ် သစ်သီးဖျော်ရည်များများသောက်ပေးပါ....နတ်သမီးလေးအမြန်ဆုံးကျန်းမာလာပါစေ...ဆက်သွယ်ချင်ရင်...thettantchocho@gmail.com မှာရှိပါတယ်...
ရိုးမ အရိုင်းပန်း said...
အမရေ stress တွေများနေတဲ့အခါ အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်ချိန်ကြာတဲ့အခါ ရင်နဲ့ ကျောညှပ်အောင့်တတ်ပြီး အိပ်မပျော်ခြင်းလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဆေးကတော့ တရားထိုင်ခြင်းပါ။ စိတ်ကို စုစည်းပေးနိုင်လို့အိပ်ပျော်စေတဲ့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်တနည်းကတော့ အိပ်ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီး နောက် ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်ကြာတဲ့အခါ ခြေထောက်ကိုပဲ ရေအေးအေးနဲ့ လောင်းပြီး အိပ်ရာဝင်ဘို့ ပါ။ မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေဘို့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ။